» रोम लामाको तामाङ सेलो ‘सोल्टिनी’ सार्वजनिक
रोम लामाको तामाङ सेलो ‘सोल्टिनी’ सार्वजनिक
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार २१:०९
मकवानपुर, १२ कात्तिक । गायक रोम लामाको तामाङ सेलो गीत ‘सोल्टिनी’ सार्वजनिक भएको छ । गीतको म्युजिक भिडियो ल्हाप्साप्साङ कार्पोको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो । गायक लामाको ‘सोल्टिनी’ एल्बममा समावेश यो गीतमा मीना लामाको शब्द र संगीत रहेको छ । गीतलाई दिपेश प्रधानले एरेञ्ज तथा मिक्सिङ गरेका छन् ।
गीतको म्युजिक भिडियोमा चर्चित मोडल पूर्णिमा लामा थोकर र गोपाल वाईबा लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । गीतको म्युजिक भिडियोमा सञ्चु थोकरको छायाँकन तथा जोहन राईको निर्देशन, कोरियोग्राफी तथा सम्पादन रहेको छ । कलाकारहरुलाई आईशा चाम्लिङ राईले सिंगारेकी छिन् । हेर्नुहोस् म्युजिक भिडियो–
बहुप्रतिभाशाली कलाकार कमल रुम्बाको दोस्रो प्रस्तुति तामाङ चलचित्र ‘तिङ्ला पुजु’ प्रदर्शन अगावै चर्चामा आएको छ । तामाङ चलचित्र ‘सांगेला घ्रान’को अपार सफलतापछि दोस्रो प्रस्तुति लिएर आएका कमलको यो चलचित्रले प्रदर्शन अगावै दर्शकहरुमाझ चर्चा कमाउन सफल भएको हो । केही दिनअघि मात्र ट्रेलर सार्वजनिक भएको यस चलचित्रमा कमलकै शब्द र संगीतमा रहेका गीतहरु पनि समावेश छन् । सार्सी साम्बा म्हेन्दो आहिन् र सेम ह्रो बोलको उक्त गीतहरुले सार्वजनिक भएको केही समयमै श्रोता दर्शकको मन जित्न सफल भएको थियो । तिङ्ला पुजुको यी दुबै गीतहरु अहिले सर्वाधिक हिट भएका छन् ।
मकवानपुरको मकवानपुरगढीमा जन्मिएका कलाकार कमल रुम्बा अहिले सात दोबाटोमा बस्छन् । उनी कलाकारमात्र नभई चलचित्र लेखक, संगीतकार, गीतकार र निर्माताका रुपमा कला क्षेत्रमा उदाएका छन् । उनले २ दर्जनभन्दा बढी गीतहरु लेख्नुका साथै संगीत पनि दिएका छन् । उनकै लेखन तथा निर्माणमा तयार भएको ‘सांगेला घ्रान’ नामक तामाङ चलचित्रले वि.सं. २०७६ मा आदिवासी चलचित्रहरुको उत्कृष्ट चलचित्रहरुमा नोमिनेशन हुँदै दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । विभिन्न भाषाका २० भन्दा बढी आदिवासी चलचित्रहरुलाई पछि पार्दै दोस्रो भएको उक्त चलचित्रलाई खुबै रुचाइएको थियो । उक्त चलचित्रलाई अहिले पनि युट्युब मार्फत हेर्न सकिन्छ । वि. सं. २०६८ सालदेखि कला क्षेत्रमा लागेका कमलको दोस्रो प्रस्तुति ‘तिङ्ला पुजु’ का दुई गीतसँगै ट्रेलर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक ट्रेलर एक्सनले भरिएको छ । दशैअघि नै प्रिमियर शोको तयारी थालिएता पनि कोरोना महामारीको कारण चलचित्रको प्रिमिएर रोकिएको छ । चलचित्रलाई सम्भव भएसम्म चाँडै नै हेटौँडाबाट प्रिमियर गरिने तयारी रहेको कलाकार रुम्बाले बताए । चलचित्रमा उनी आफै पनि खतरनाक भिलेनका रुपमा देखापरेका छन् । हेर्नुहोस् यो भिडियो फिचर–